Topgolf any Arizona: Fialam-boly mitaiza ny klioba
Topgolf any Scottsdale sy Gilbert, AZ
Fianakaviana miala ao Topgolf any Scottsdale. © Judy Hedding
Tamin'ny 2014, i Topgolf dia nanokatra ny toerana voalohany an'i Arizona tao Scottsdale; ny faharoa tao Gilbert ( Lohasahato Atsinanana ) dia nandeha haingana nandritra io taona io ihany. Miorina any Texas, izay efa misy ny antsasaky ny toerana misy azy ireo, ny iray tany Scottsdale dia tsy novolavolaina tao anatin'ny faritra iray na anton-drivotra. Natao izany ary natsangana avy any amin'ny tany Amerikanina teo akaikin'ny trano fonenan'ny Talking Stick.
Topgolf dia mihoatra lavitra noho ny fiarandalamby, na dia izany aza. Fialamboly golf ho an'ny olona amin'ny sokajin-taona rehetra sy ny fahaiza-manao golf. Ao Topgolf dia misy baoritra 102 eo amin'ny ambaratonga telo, ny tsirairay dia natao hananana olona enina. Ny klioban'ny gilasy sy ny baolina kitra amin'ny baolina kitra no omena. Ianao, miaraka amin'ny daty, ny zanakao, ny reninao na ireo mpiara-miasa aminao dia maka lalao avy amin'ny rafitra elektronika ary mifandimby mandingana ny baolina kitra amin'ny taratra lavitra. Ny chip ao anaty baolina fandehanana an-dàlam-be dia manoratra rehefa mahazo baolina sy teboka omena. Eritrereto hoe toy ny milalao baolina amin'ny tontolon'ny baolina koveta!
Tsy simba ny golf. Tsy misy baoritra amin'ny baoritra misy sarin'i St. Andrews ianao. Mampiasa fikambanana tena izy ianao, baolina tena izy, amin'ny fiara fitondra marina. Ny tanjona dia eo anelanelan'ny 20 metatra ka hatramin'ny 215 metatra.
Pejy 1: Fialambolin'ny gulf gasy
Page 2: Ny fomba fiasa, ny vola lany
Page 3: Ny zavatra hafa mitranga, ny soso-kevitro
Page 4: 13 Ny zavatra tokony ho fantatra alohan'ny handehananao
Page 5: Laharam-be, fitarihana, fifandraisana, ora
Manao ahoana izy io, inona no sarany
Eo am-pitoerana ambony, toeram-pivarotana ary mihantona. © Judy Hedding
Ny vidin'ny fanavaozana farany: Jolay 2016
Tsy maintsy mandoa onitra $ 5 indray ny olona mba hiditra ao amin'ny rafitra. Nomena karatra maha-mpikambana ianao. Rehefa tonga any Topgolf ianao dia hijery sy handoavana ny entana.
Ny tahan'ny ora dia miovaova eo amin'ny $ 25 isaky ny ora hatramin'ny $ 45 isaky ny ora, arakaraka ny andro. Ny alahelohanao milalao dia mora kokoa. Ny fananana fanofana dia ahitana olona enina afaka milalao.
Misy drafitr'asa isam-bolana isam-bolana (farafahakeliny ny fanoloran-tena azo ampiharina). Afaka manana lalao tsy manam-petra amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma ka hatramin'ny mitataovovonana ianao ary afaka miisa dimy. Tsy mpangorohoro aloha ianao na miasa mandritra ny herinandro? Afaka manana lalao tsy misy alahady hatramin'ny alakamisy ianao, manomboka amin'ny 10 ora hariva mba hifanakaiky ho anao sy ho an'ny vahiny dimy. Raha tsy afaka mifatotra amin'ny fandaharam-potoana ianao kanefa fantatrao fa te hampihatra na hilalao matetika ianao dia afaka mahazo 200 dôlara mendrika ny milalao mandritra ny volana ho an'ny $ 150. Ny Platinum an'ny mpikambana iray isam-bolana dia manome anao lalao tsy misy fetra mandritra ny ora Platinum, ary koa ny tombontsoa hafa amin'ny VIP. Moa ve ianao polisy mavitrika, afo, miaramila na EMS? Manontania momba ny Haba Maimaim-poana.
Ny drafitr'asa isam-bolana isam-bolana dia tonga amin'ny loka $ 1,000 amin'ny loka iray raha toa ianao ka mahazo iray amin'ny tanjona mena, manga na fotsy. Ny lavaka iray dia mety hividianana golf amin'ny Topgolf!
Ny Topgolf dia mampiasa ny klioba Callaway, ary azo alaina any amin'ny toerana tsirairay izy ireo ho an'ny rehetra. Ny klioban'ny tanora sy ny klioba havia dia misy ihany koa.
Ny karatry ny maha-mpikambana anao dia tsy vitan'ny hoe manaraka ny asanao sy ny isa ambony (ambany ihany koa, indrisy fa indrisy) fa karatra sarobidy ihany koa.
Inona no miseho, mihoatra ny soso-kevitro
Sakafo atoandro ao Topgolf Riverwalk any Scottsdale. © Judy Hedding
Ny baoron'ny tsirairay ao amin'ny Topgolf dia manana fahitalavitra manokana, noho izany dia tsy voatery tsy handiso fanatanjahan-tena na inona na inona ny lalao amin'ny andro.
Mila fiatoana ve? Miaraka amin'ireo olona izay tsy liana amin'ny fandresena baolina golf? Ankoatra ny bar sy ny trano fisakafoanana dia misy efitrano mahafinaritra misy latabatra, TV sy video lalao.
Ny alakamisy, zoma sy asabotsy alina dia miaina bandes na DJs mandihy.
Ny Take - Ao amin'ny Plus Plus
Topgolf dia manolotra fahafinaretana mahafinaritra, mifototra amin'ny toetr'andro mifanaraka amin'ny daty na ny fialam-boly.
Afaka miditra mora ianao - tsy voatery hiondrika mihitsy ianao - amin'ny baolina kitra an-dàlam-be tahaka ny azonao tratrarina amin'ny fotoana voatondro ary ny laharan-tariby elektronika dia mahavita ny lalao tsotra.
Amin'ny fitsidihanao voalohany, na amin'ny fotoana rehetra ilanao fanampiana, azonao atao ny manazava ny fomba fiasa sy ny fomba fampiasana ny teknolojia.
Ny trano fisakafoanana no sakafo tsara kokoa noho ny toetranao. Afaka manoro be dia be ny burger aho! Mety ho safidy tsara mihitsy aza ny sakafo antoandro rehefa tsy milalao golf mihitsy ianao, tsy misy mpikam- bana ilaina mba hisakafo eto.
Tsy voatery hijanona ianao ary hipetraka ao amin'ny trano fisakafoanana raha tsy tianao. Ny mpanamboatra server dia mandray baiko ary manolotra sakafo sy zava-pisotro ho an'ireo baoritra. Aza adino ny manapaka, toy ny mahazatra ny mpizara.
Hitako ny Topgolf ho safidy azo iainana ho an'ny fialamboly, fialan-tsasatra mandritra ny andro, fialantsasatra na fety, na fotoana hafa izay irian'ny olon-drehetra hivory sy hanana fahafinaretana.
Ny fiarako - Aoka ho mailo
Ny takarivan'ny TopGolf dia afaka mandany lafo, indrindra raha mandeha irery ianao na miaraka amin'ny namana iray na daty iray.
Amin'ny fotoana faratampon'ny fotoana dia miandrasa miandry roa ora na mihoatra. Izany no atao hoe bar.
Na dia tsy ilaina ny manam-pahaizana momba ny golf, dia azo antoka fa manampy ny mahafantatra kely momba ny fomba fihodinana klioban'ny klioba na ny lalao dia ho lasa matroka / mahakivy. Tsy mahafinaritra velively ny manipy baolina fantsom-bokatra any anaty lakilasy. Raha tsy afaka mitifitra baolina amin'ny golf ianao toy izany dia miakatra eny amin'ny rivotra ary manohy izany, farafaharatsiny dia tokony hiezaka ny hahazo iray amin'ireo baskety ambony ianao. Farany, ny baolinao dia hianjera amin'ny sehatra!
Tamin'ny fitsidihako, dia voafetra ny fahafaha-milalao baolina amin'ny golf mba hitifitra mpamily iray. Ny tavy plastika dia latsaky ny halavany ny halavany. Tsy afaka mampiasa ny teesanao ianao amin'ny fomba rehetra.
13 Zavatra Mahaliana momba ny Topgolf
Ny mpilalao golf dia mampiasa ny tranobe Topgolf mba hanatsarana ny fahamendrehana sy ny tsy fitoviana. © Judy Hedding
13 Zavatra ho Fantina Alohan'ny Hiakaranao Ho Any Topgolf
1. Tsy misy famandrihana azo ekena (misy antokon'olona 12 na mihoatra afaka mamaky ny Departemantan'ny Fihaonana). Ny mpikambana Platinum dia mahazo ny laharam-pahamehana amin'ny baoritra, ary ny mambra dia afaka mividy laharam-pahamehana; izay mametraka azy ireo eo an-tampon'ny lisitra misy anao raha toa ka tsy misy baoritra.
2. Fitsipika ankizivavy? Fangona gulf dia tsara fa tsy ilaina. Tsy misy fehezan-dalàna tena izy eto, ary tsy ilaina ny kiraro golf. Ny kiraro gilasy matevina dia tsara raha manana azy ireo ianao, fa ny ankamaroan'ny olona kosa mitafy kiraro / kiraro mba hilalao.
3. Momba ny lisitra miandry. Amin'ny fotoana faratampon'ny fotoana dia afaka miandry miandry ianao, indraindray. Ao no misy ny trano fatoriana sy ny bar mihitsy! Mitonia. Ity dia tokony ho mahafinaritra. Raha semi-pro ianao miezaka ny mivoaka ao anatin'ny 500 amin'izao ianao amin'izao fotoana izao, ary dia maika ianao, mety tsy tonga amin'ny 8 ora hariva amin'ny alin'ny zoma alina.
4. Ny sakafo sy ny zava-pisotro dia ampiasaina ao amin'ny trano fisakafoanana, fa koa eny amin'ireo baskety.
5. Ny toeram-pisakafoanana eny an-kianja eny amin'ny toeram-pitrandrahana dia mivoha. Nogadraina izy ireo tamin'ny fahavaratra ary nafana tamin'ny ririnina. Ny trano fisakafoanana, bara sy efitrano dia ao an-trano, toy izany koa ireo efitrano fivoriana.
6. Ny klioban'ny mpilalao golf dia omena maimaim-poana amin'ny maha mpikambana anao. Ianao anefa, na izany aza, dia raisina an-tànana hitondra ny fikambananao sy ny olona maro.
7. Misy lalao maromaro samihafa izay tokony hofidiana, avy amin'ny fototra (toy ny bowling) amin'ny lalao sarotra kokoa ho an'ny Topgolf ery za-draharaha.
8. Tsy azo alaina ny sakafo na zava-pisotro.
9. Topgolf dia toeram-pilaminana tanteraka.
10. Jereo ny aterineto ho an'ny sehatra manokana, foto-kevitra, foto-drafitr'ireo ankizy sy toby, sns.
11. Ny mpitsabo 14 dia mitaky fanaraha-maso ny olon-dehibe. Tsy maintsy miaraka amin'ny olon-dehibe ny vondron'olona 16 sy ambany.
12. Misy fampiharana amin'izany! Raha maka ny fampiharana Topgolf amin'ny findainao smartphone ianao, dia afaka manampy vola amin'ny karatrao, jereo ny tantaran'ny lalao manokana, jereo ny fifanarahana, jereo ny sakafo ary manova ny fahitalavitra amin'ny alàlanao.
13. Tsarovy ny fampitahako ny Topgolf hifaninana? Eny ary, afaka miditra eto amin'ny ligy koa ianao. Tahaka ireo ligin'ny baolina kitra, misy saram-panafahana sy loka. Ny mpihatsaravelatsihy dia 2- sy 4-ligy.
Contact Information, Directions, ora
Gulf, antoko, bar - maka fotoana hialana ao amin'ny efitrano. © Judy Hedding
Topgolf ao Scottsdale / Riverwalk dia toerana faha-13 amin'ny orinasa maneran-tany, voalohany any amin'ny faritra Atsimo Andrefana, ary ny voalohany hatsangana ao amin'ny tany Amerikanina. Misokatra fito andro isan-kerinandro, hatramin'ny alahady hariva ka hatramin'ny alakamisy ary hatramin'ny 2 maraina amin'ny zoma sy sabotsy alina (2014).
Toro lalana mankany Topgolf Riverwalk any Scottsdale
Raiso ny "Loop 101 Pima Freeway" mankany amin'ny fiantsonana Indiana Bend Road. Mivilia miantsinanana. Avadiho ny lalambe. Topgolf dia ho eo ankavianareo, alohan'ny handehananareo any amin'ny Talking Stick Hotel & Casino. Misy parking malalaka malalaka.
Azonao atao ny mahita an'io toerana io amin'ny marika Google. Avy any dia azonao atao ny mivoatra sy mivoaka, mandamina toro-lalana raha mila fanazavana bebe kokoa mihoatra noho ny voalaza etsy ambony, ary jereo izay misy eo akaiky.
Talking Stick Resort sy Casino: Koncerts
Fiofanana ho an'ny lohataona (Martsa) ao amin'ny Salt River Fields
Octane Raceway: Mandehana Karts
Aiza no hijanonana akaiky
Talking Stick Resort & Casino: Mijery Reviews, Jereo ny Taratasy eto amin'ny TripAdvisor
Topgolf Gilbert no toerana faha-14 amin'ny orinasa maneran-tany. Misokatra fito andro isan-kerinandro, hatramin'ny alahady hariva ka hatramin'ny alakamisy ary hatramin'ny 2 maraina amin'ny zoma sy sabotsy alina (2014).
Tari-dalana ho an'i Topgolf Gilbert
Ny Topgolf Gilbert dia miorina ao amin'ny Village SanTan, toeram-pivarotana lehibe iray any amin'ny Lohasahan'i Atsinanana. Raiso ny "Loop 202 Santan Freeway" (TSY Miantso ny Mazava ny Red Cross 202).
Avy any andrefana, alao ny Exit 41, San Tan Village Parkway. Mialà eo ankavia any SanTan Village Parkway, miampita ny Williams Field Road. Ho eo ankavananao ny Topgolf.
Avy any avaratra, alao ny Exit 40 Williams Field Road ary mivily eo amin'ny Williams Field. Miverena hiverina indray (avaratra) eo amin'ny SanTan Village Parkway. Ho eo ankavananao ny Topgolf.
Misy parking malalaka malalaka.
Fiofanana ho an'ny lohataona (Martsa) ao amin'ny Sloan Park (Cubs Park)
More Attractions at Gilbert
Hotels in Chandler / Gilbert
Tahaka ny mahazatra ao amin'ny orinasa, ny mpanoratra dia nahazo fitsidihana maimaim-poana ho an'ny tatitra miverimberina. Na dia tsy nisy fiantraikany tamin'ity fanadihadiana ity aza, mino an'i About.com ny famoahana tanteraka ny fifandonana mahaliana rehetra. Ho fampahalalana bebe kokoa, jereo ny politika etika. Ny vidiny sy ny fanatitra rehetra voalaza ato dia mety miova tsy ampoizina. 06/14, 12/14
Inona ny ora ao Phoenix any Arizona?
Veterans Oasis Park / Environmental Education Center ao Chandler
October Weather in Greater Phoenix
Aiza ny Computer Public?
Farofa dia fomba mora hanina any Brezila
Manana zava-pisotro any Las Vegas
Manome toky ny fanambadian'ny pelaka ve i Arizona?
Ny Fetin'ny Mpifankatia tany Frantsa
Andro iray tao amin'ny Maria la Gorda Beach ao amin'ny Guanahacabibes any Kiobà
Fivorian'ny Ankizy sy ny fianakaviana ao Los Angeles 2017
9 Iconic Indian Cuisine Restaurants any Bangalore ho an'ny trano rehetra
Nosy Hong Kong vs Kowloon - toerana hijanonana
Toronto ny Fihaonana Tsara Indrindra sy ny Asa
Inona avy ireo firenena ambany?